Nezvedu - JITO Kubereka
JITO Kubereka ndeye yesainzi uye tekinoroji bhizinesi rekutsvagisa kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira nekutengesa. Iyo inhengo ye china inobata indasitiri musangano, yehurumende unit yehebei dunhu rinotakura musangano, yenyika yepamusoro-tech bhizinesi. Mutungamiri mukuru Shizhen Wu ndiye komiti inomira yemusangano wezvematongerwo enyika wezvematongerwo enyika weguantao County. Kubva zvagadzwa, yakave yakazvipira mukugadzira mhando yepamusoro uye yakanyanya kunyatsoita mabheyari, iine mhando yemhando yeP0 (Z1V1), P6 (Z2V2) uye P5 (Z3V3). Iyo yakanyoreswa mhando iJITO uye zvakare yakanyoreswa muEuropean Union. Iyo kambani yakawana ISO9001: 2008 uye IATF / 16949: 2016 system certification, iine akawanda maR & D patent, uye yakapihwa "hebei purovhinzi chibvumirano-kuremekedza uye chikwereti-chakavimbika bhizinesi" nehebei bhizinesi rechikwereti kusimudzira mubatanidzwa uye hebei mapurovhinzi emakambani emakambani ekutsvagisa chikwereti Institute, uye "hebei province sainzi uye tekinoroji SME" nebazi rezvebazi resainzi uye tekinoroji, nezvimwewo uye vakapa chitupa. Iyo fekitori nyowani yakapedzwa ikaiswa mukushandisa mu2019, iine nzvimbo yekuvaka inopfuura zviuru gumi zvemamirimita.
JITO zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumotokari, marori, mota dzeinjiniya, michina yekurima, kugadzira mapepa, kugadzira simba, kuchera, simbi, maturusi emuchina, peturu uye njanji nezvimwewo Kuti upe basa riri nani kune vatengi uye ive nyore kune vatengi uya kuzokurukura uye kushandira pamwe, kambani yedu yakasimbisa Liaocheng Jingnai Machinery Parts Co., Ltd muLiaocheng guta, shandong province. Iyo traffic iri nyore kwazvo, inongoda 1 awa kuti usvike kumavirira njanji chiteshi muJi'nan uye 1.5 maawa kuti usvike muJinan yaoqiang nhandare yenyika. Iyo kambani ine yakanakisa yekutengesa timu uye R & D timu, izvo zvinoita kuti JITO inobereka ive inozivikanwa zita muchiso.
Kuti tivandudze mukurumbira, kambani yedu inopinda mukuratidzira kwakawanda kutenderera pasirese gore rega, uye tinoramba tichitora chikamu muchikamu chega chega cheshanghai chepasi rese chinotakura hunyanzvi hwekuratidzira, china kupinza uye kutumira kunze zvigadzirwa zvakanaka, beijing nyika dzese mota kuratidza, shanghai frankfurt auto zvikamu kuratidza nezvimwe .
Tine yakakwana yekugadzira tambo, uye tinogara tichinyatso kudzora maitiro ega ega ekugadzira, kubva pakugadzira zvinhu zvakasvibirira, kutendeukira kune kupisa kurapwa, kubva kukuya kusvika kugungano, kubva pakuchenesa, kuzora mafuta kusvika kurongedza nezvimwe. Mukuita kwekugadzira, kuburikidza nekuzviongorora-wega, kutevedzera kuongorora, kuongorora masampling, kuongorora kwakazara, senge kuomarara sekuongorora kwemhando yepamusoro, kwakaita kuti zvesimba zvese zvisvike pamwero wepasi rose. Panguva imwecheteyo, kambani yakamisikidza yepamberi yekuyedza nzvimbo, yakaunza zviridzwa zvemberi zvekuyedza, chimbo chekuyera kureba, spectrometer, profiler, mita yekutenderera, mita yekudengenyeka, mita yekuomarara, metallographic analyzer, inotakura hupenyu hwemuedzo uye zvimwe zviridzwa zvekuyera nezvimwe. hunhu hwechigadzirwa kusvika pakuferefetwa kwese, iko kuita kwakazara kweyakajeka zvigadzirwa zvekuongorora, ita chokwadi cheJITO kusvika padanho re zero zero zvigadzirwa products Zvigadzirwa zvedu zvakafananidzwa nevazhinji vanodzora uye vekunze OEM mutengi, uye kutumirwa kuEuropean Union, maodzanyemba eamerica, kuchamhembe kweamerica, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweasia, iyo yepakati East, africa nedzimwe nyika makumi matatu.
JITO inobereka nehupenyu hurefu, kukwirira kwakaringana uye kuita kwepamusoro kwakakunda kuvimba kwevatengi vedu, isu tichaita inoramba ichiedza kuyedza kukosha uye hupfumi hwevatengi. Tigashire takabatana ruoko nekambani yeJITO, kugadzira mangwana akanaka！